Mapurisa, Mauto Vanoumba Komiti Ichaferefeta Kurohwa kweMapurisa neMasoja neChipiri
Mapurisa nemasoja anoti awumba komiti ichaferefeta kurohwa kunonzi kwakaitwa mapurisa nemasoja muHarare neChipiri.
Vachitaura nevatori venhau neChishanu pamuzinda weZimbabwe Republic Police pamusangano wavaita vaine vamiriri veZimbabwe National Army, mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vashora kurohwa kunonzi kwakaitwa mamwe mapurisa negurusvusvu remasoja pakati pedhorobha.
Kunyange hazvo Amai Charamba vasina kubuda pachena kuti chii chakakonzera kurohwa kwemapurisa nemasoja, zvinonzi masoja akanga atsamwira imwe motokari yawo yakanga yakandirwa simbi dzinobaya mavhiri, kana kuti ma spikes, nemapurisa.
Amai Charamba, avo varamba kutambira mibvunzo yevatori venhau, vati kunyange hazvo mapurisa akarohwa nemasoja, ivo semapazi maviri vakabatana mukuchengetedza nyika.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development, VaClaris Madhuku, vati panogona kushaya kana musoja mumwe chete anosungwa.
VaMadhuku zvakaitika izvi zvinogona kuve nechekuita nezvematongerwo enyika pamwe negakava riri muZanu PF pakatariswa hukama pakati pemukuru wemauto, VaAugustine Chihuri nemukuru wemauto VaConstantine Chiwenga.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, vakati vari muchiuto havafanire kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kunyange hazvo pose panoitwa sarudzo masoja nemapurisa vachipomerwa mhosva nemapato anopikisa ekushanda akarerekera kubato reZanu PF.
Kusafara kwemasoja nekukandirwa simbi dzinobaya mavhiri kunonzi kwakaitwa mota yawo nemapurisa kunouyawo apo veruzhinji munyika yose varikugunun’una nekushandiswa kwema spikes aya vachiti vari kukuvadzirwa motokari dzavo neminzwa yesimbi iyi. Vatyairi vedzimotokari vanotiwo hupenyu hweveruzhinji huri kuiswa munjodzi nezviri kuitwa nemapurisa izvi.
Asi VaChihuri vakaudza matare mwedzi wapera kuti kushandiswa kuri kuitwa ma spikes aya nemapurisa mumigwagwa inzira yemapurisa yekuzvidzivirira pavanenge vachiedza kuti mitemo yemumigwagwa itevedzerwe sezvo mamwe mapurisa achinzi akatsikwa akafa nemotokari dzevatyairi vanenge vachitiza mapurisa kana vachinge vapara mhosva dzemumigwagwa.
Mashoko aVaChihuri aya anotevera chikumbiro chakasvitswa kumatare nemutungamiri wesangano rinorwora kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association, VaOkay Machisa, chekuti ma spikes asashandiswe munyika.